Jose Mourinho oo Qado Sharaf la Qaatay Madaxa Arsenal Xilli lala Xiriirinaayo Booska Unai Emery – Bandhiga
Jose Mourinho oo Qado Sharaf la Qaatay Madaxa Arsenal Xilli lala Xiriirinaayo Booska Unai Emery
Jose Mourinho ayaa lagu soo waramayaa inuu la qadeeyey madaxa kooxda Arsenal Raul Sanllehi usbuucii lasoo dhaafay, iyadoo la isla dhexmarayo in tababarihii hore ee Chelsea iyo Manchester United uu bedelayo Unai Emery si uu u noqdo macalinka Arsenal.
Kulankii sabtida ee barbaraha 1-1 ay la galeen Wolverhampton Wanderers ayaa la rumeysan yahay inuu cadaadis ku saaray Emery, kaasoo ku dhibtooday inuu qanciyo kooxdiisa tan iyo markii uu yimid Emirates Stadium xagaagii 2018.
Mourinho oo shaqo la’aan aha tan iyo markii uu ka tegay United bishii Disembar ee la soo dhaafay – ayaa la sheegayaa inuu xiiseynayo inuu noqdo macallinka cusub ee kooxda Arsenal maadaama uu doonayo inuu ku raaxeysto guulo uu la gaaro koox kale oo Ingiriis ah.
Sida laga soo xigtay The Times, Mourinho ayaa ka farxiyay Sanllehi qorshayaashiisa kooxda markii ay wada qadeeyeyn, taasoo sii hurineysa soo jeedinta ah in isbadal lagu sameeyo kooxda.
Macalinka Boortaqiiska ayaa ka shaqeynayay tv-yada ilaa bilowgii ololaha 2019-20 laakiin waxa uu shaaca ka qaaday dhowr jeer in uu doonayo in uu ku soo laabto maamulka.
Arsenal ayaa wajaheysa talaabo ay ugu safreyso Vitoria Guimaraes koobka Europa League habeenka Arbacada ka hor inta aysan u safrin Leicester City horyaalka Premier League isbuuca soo socda,kulankaaso lo arko mid lagu go’amin karo nolosha Emery ee Arsenal.